Abantu babesoloko befuna ukuba namazinyo aphilileyo kunye namahle. Yintoni engazange ifike kule nto, ngamanye amaxesha nangenxa yexabiso lempilo yomzimba. Emuva eYiputa kumandulo, kwakukho izixhobo zokucoca amazinyo, unamathisele, umzekelo. Yayinomxube wepumice kunye neviniga yewayini. Ngendlela, i-soda kunye ne-chaki ziyizithako eziqhekezayo abantu abasetyenziselwa amazinyo ukugcoba ixesha elide.
Ngethuba lethu, ukumamatheka kwiparele kuyimpawu ebalulekileyo yezobuhle zanamhlanje. Okwangoku, kukho iindlela eziliqela ongayenza ngayo amazinyo akho. Ukuzonwabisa kukuba le nto, akuyimfuneko ukuba uye kwi-polyclinic ukuya kwi-professional - ungayifaka amazinyo akho kwiimeko zasekhaya, ukuba usebenzisa i-pastes ekhethekileyo yokucoca.
Ukuqhaqha kwamazinyo ukugcwala kunamalungu amaninzi ahlukeneyo anokubhekwa njengamaqela ahlukeneyo ahlukeneyo - ezo ziqulethe iikhemikhali zokucoca kunye needesti ezinepesenti eziphezulu zezithako eziqhekezayo.
Amagqabi aguqa amazinyo afana neekhemikhali
Ngokusekelwe kwintlobo yokuqala yeedese usebenzisa i-agent e-oxidizing ezinamandla kakhulu, umzekelo, i-hydrogen peroxide ne-urea. Ezi zinto ezinomgangatho ophezulu zivelisa i-oksijeni ye-oksijini ekhululekayo eyenza i-oxidizes pigments, eyona nto ibangelwa umbala ophuzi kumazinyo. Le pigment phantsi kwefuthe lokumhlophe liba libala, kunye namazinyo ngenxa yolu hlobo.
Kubalulekile ukwazi ukuba ukubunjwa kwamagqabhoko amhlophe kungabandakanya izinto ezitshintsha umbala wetywina. Kodwa kukho enye inempembelelo, oko kukuthi, itywina alitshintshi umbala walo, kwaye ubuso bezinyo buba lula. Ukuba oko kwenzeka, kuthetha ukuthatha i-bleaching you have wrong.
Iipasiti ezinjalo-ukukwazi ukukhawulela ngokukhawuleza umgangatho wezinyo, onokuchazwa ngokuphendula kweekhemikhali ezikhawulezayo. Nangona kunjalo, oku kubonwa njengento ebangelekanga kwi-chemical bleaching. Ezi zintathu zingathunyelwa kwimveliso yezobugcisa kunonophelo lwamazinyo, kwaye ukuba imipolzovatsya engalawulekiyo, inokubangela ukuba intshabalalo yezinyo ikhutshwe, kwaye kukho ukubonakaliswa kwempendulo. Ngoko ke, amazinyo ezinamazinyo eziqukethe acidi eziphilayo ezisetyenziswayo kunye ne-hydrogen peroxide kufuneka zisetyenziswe kuphela emva kokubonisana nengcali kwintsimi. Amazinyo aphakamisa ukusetyenziswa kwamagqabi okugcoba kunye nomncedisi oncedisayo ukuxhasa iziphumo zokusasaza ngendlela yeklinikhi. Kwaye ngamanye amaxesha ezinye zazo zisetyenziswe njenge-artificial and prophylactic agent phambi kohlobo lwe-hyperesthesia ne-gingivitis.
Amagqabini ezinozinyo zokuqhawuliswa kwegazi, ephezulu
Iqela lesibini leedesti linempembelelo ebhengeziweyo yecandelo elincinci, elibandakanya i-dicalcium phosphate, i-aluminum oxide okanye i-silicon oxide. Iimveliso ze-abrasive zihlukileyo, kwaye zinokufikelela kwipesenti ezingamashumi amane kumqulu wezinyo zokugcoba. Zinepropati efanelekileyo yokuphamba. Ezi zinto zivumela ukuba uqhubise amazinyo okutya asele emlonyeni, kwaye ususe ngokukhawuleza ukuhlaselwa. Ubungakanani bokubakho kobugqwetha kwi-pastes buxhomekeke kubukhulu beengqununu, kwaye inkulu le ngqungquthela, iphakamileyo ipesenti yokuthoba. Le nkcazo ibhetele, kodwa nayo inomngcipheko wokulimala kumlomo womlomo. Isiphumo saso esibi kwizinsini, ngoko abantu abasebenzisa rhoqo ama-toothpastes nala ma-pastes aqukethe izithako ezilahlayo, badla ngokukhalaza nge-hyperesthesia (ukwandisa ukuqonda kwamazinyo).
Uninzi lwezinyosi zanamhlanje luqulethe izinto eziphathekayo, kwaye enye yokhuseleko kakhulu i-papain, eyimvelo ye-enzyme eyenziwa kwisiqhamo sepapaya. Ngesiphumo esiphezulu sihlula isakhiwo seprotheni yeplate. Kubaluleke kakhulu ukuba i-ejenti yezinyo ingabhujiswa, ekubeni i-enzyme yemvelo yale sityalo ikuvumela ukuba unqande amazinyo akho kunye ne-arhente ye-low-abrasive agent. Eyakhelwe ngamazinyo emini, i-plaque ingasuswa ngokunyameka nangokuthobeka. Uninzi lweemveliso eziqhelekileyo zamagqabi okugcoba ukubhula zibhekisela ngqo kule qela.
Ukudlulela kwamazinyo okugqithiseleyo okuqhawulwa kwamanzi, okuveliswa ngumenzi wasekhaya:
Iiperile ezintsha zeSoda Bicarbonate
I-Toothpaste ye-toothpaste ye-bleaching from producers angaphandle
I-Agy Double White, i-Beverly Hills I-Universal Protection, i-Aquafresh Whitening, i-Blend-a-Med Soda i-Bicarbonate, i-Blanx (zonke iintlobo), i-Colgate Sensation Whitening, i-Rembrandt-i-white-whitening blew, i-ENZYM KOMPLEX.
Ngubani ongacebisi ukucima amazinyo akho ?
Ukuyeka ukugcoba izinyo kufanele ukuba abo bantu abanesifo se-periodontal kunye nezilonda ezinamazinyo kunye nalabo abanamaqabunga amancinci. Kunqweneleka ukuphelisa iingxaki ezikhoyo ngokugqithisa. Ngaphandle koko, ukugcoba amazinyo akho, uya kwandisa ngakumbi izifo ezikhoyo. Ukubhikisha akuhlaziyi abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesibhozo ubudala kwaye bekhulelwe. Musa ukuthenga unyawo lwezinyo, kumxholo apho i-hydrogen peroxide ingena kumda ongaphezulu, oko kukuthi, 0.1%.
Emva koko, phawula ukuba ama-pastes amazinyo aphunga, ngelishwa, akakwazi ukunika uncedo olunjalo, njengoko linikwe kuthi ngeentengiso ezininzi. Ukongeza, ukuxubha akunakukwazi ukuba yinyo yonke, ngoko ke xa uthengisa unobumba obumhlophe, kucetyiswa ukuba uyazifuna kuphela ukuthenga izinto eziphezulu eziphendulela ukhuseleko kuzo zonke iziganeko.
Ukwandisa iindleko zokusebenzisa amazinyo ezinomsoco, kufuneka uhambelane nemigaqo yokunakekelwa kwamazinyo. Kungcono ukusebenzisa i-straw, xa uthatha iziphuzo ezifana neyeyi, ikhofi ebandayo, i-juice okanye iglasi, okuya kugcina amazinyo akho asemhlophe. Ukuhlanjululwa okusemthethweni komlomo emva kokutya.
Ioli eoliva kwesikhumba
Ikhumba elomileyo alikho isigwebo!
Indlela yokwenza intandokazi ubuyele?
Ukutya kwe-egg okanye i-coco-mammy ngokumalunga namafutha amaninzi
Iireyizi zamachiza endabuko ukukhwaza
Qinisekisa umhla womtshato kwi-horoscope, izibalo kunye nezibonakaliso zabantu
Pizza nge salami